Mayelana NATHI - Huiyuweiye (Beijing) Fluid Equipment Co., Ltd.
IHuiyuweiye (Beijing) Fluid Equipment Co., Ltd.
IHyuweiy (Beijing) Fluid Equipment Co., Ltd yinkampani yegatsha laseBeijing Huiyuweiye international Environmental Engineering Co., Ltd. (http://www.bjhuiyuguoji.com/index.html)
Yinkampani yobuchwepheshe obuphezulu ekhiqiza imishini yoketshezi, ucwaningo lwezinto ezihlanganisiwe nentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nensizakalo eyodwa, neqembu elinamandla lobuchwepheshe, inqubo yokukhiqiza enhle kakhulu, ikhwalithi yomkhiqizo omuhle kakhulu, insizakalo esheshayo enhle, ukuhlinzeka abasebenzisi ngobubanzi obugcwele izixazululo zoketshezi. Sisebenzisana namanyuvesi amaningi ukusungula ubudlelwano bokuthuthuka besikhathi eside. Imikhiqizo yethu isetshenziswa kabanzi kumalabhorethri ocwaningo nokukhiqizwa kwezimboni neminye imikhakha. Sine engineer professional mechanical, engineer kagesi, OEM onjiniyela, futhi yokuthengisa professional kanye emva service ukudayiswa ithimba, kwakheka professional, abasha, ukuphishekela iqembu ephelele.
Izisekelo zenkampani yethu e-University of Science and Technology Beijing, Harbin Institute of Technology, Hebei University of Technology, Hebei United University nakwamanye amanyuvesi kanye namakolishi, zithembele kunzuzo yayo enamandla yamathalente ezobuchwepheshe, yethule isayensi nobuchwepheshe obuthuthukile obuvela emazweni angaphandle yaqala sebenza embonini yensimbi ngokunemba. ulayini wethu wokukhiqiza uqukethe ipompo le-peristaltic, ipompo yesirinji yelabhorethri, ipompo yesirinji yezimboni, ipompo le-plunger nepompo ye-OEM ngokuya ngemfuneko ethile yekhasimende. Kuze kube manje sinezichungechunge ezingaphezu kwezingu-40 zokukhiqizwa kwamamodeli angama-360. Imikhiqizo ihlolwe yisikhungo sobuchwepheshe, ifinyelele ezingeni eliphakeme lomhlaba jikelele.
Eminyakeni edlule, ubuholi benkampani bebulokhu buhambisana nomqondo "webhizinisi lesayensi nobuchwepheshe", buhlola umgwaqo wentuthuko ohlukahlukene.
Imodi yokuphatha esezingeni eliphakeme iyisilawuli sokuthuthuka kukaHuiyu. inqubo enhle yiseyili yentuthuko kaHuiyu, Ukuhlangabezana nokuchuma kokuthuthuka kwesayensi nobuchwepheshe, uHuiyu kumele akwazi ukuhamba ngomkhumbi. Ungaba nesibindi sokuba ngowokuqala.